Abafundi BeBhayibhile Bema Beqinile “Ngelixa Lovavanyo” | Isifundo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
OKUPHUMA KOOVIMBA BETHU
UKUQHAMBUKA kweMfazwe Yehlabathi I ngowe-1914 kwenza abantu abaninzi ehlabathini babona ukuba aBafundi BeBhayibhile abaz’ ukuba nanxaxheba kuloo mfazwe. (Isa. 2:2-4; Yoh. 18:36; Efe. 6:12) Bachatshazelwa njani abakhonzi bakaThixo eBritani?
UMthetho Wenkonzo Yasemkhosini wowe-1916 wawunyanzelisa ukuba onke amadoda angatshatanga aseBritani aneminyaka eli-18 ukusa kuma-40 amele aye emkhosini. Wawunalo nesolotya elivumela ukuba bakhululwe abo banezizathu ezinyanisekileyo ezibalelayo ngenxa “yonqulo okanye imigaqo yabo yokuziphatha.” Urhulumente waseka iinkundla zomkhosi ezaziza kugqiba ngabo balifanelekelayo eli lungelo nangemiqathango yokulinikwa.
Zange kube kudala kwabe sekubanjwe kwavalelwa aBafundi beBhayibhile abangama-40 kwiintolongo zomkhosi, babe abasi-8 bethunyelwe ngenkani edabini eFransi. Ngexa yesi senzo singekho sikweni, abazalwana baseBritani babhalela iNkulumbuso yelo uHerbert Asquith bekhalazela oko kuvalelwa, yabe ihamba nesibongozo sokuba bakhululwe esasityotyelwe ngabantu abangama-5 500.
Kwathi kusenjalo kwafika iindaba zokuba eso sibhozo sasithunyelwe eFransi sigwetyelwe ukubulawa ngokudutyulwa ngenxa yokwala ukulwa emfazweni. Kodwa bathi besadwelisiwe belindele ukudutyulwa, isigwebo sajikwa sayiminyaka elishumi entolongweni. Babuyiselwa eNgilani ukuze benze iinkonzo zoluntu.
UJames Frederick Scott
Njengokuba imfazwe yayitsala, eso sinyanzelo sokuya emkhosini sadlulela nakumadoda atshatileyo. Kwityala lokuqala lolu hlobo eManchester, eNgilani, kwakumangalelwe uHenry Hudson, ugqirha onguMfundi weBhayibhile. NgoAgasti 3, 1916, inkundla yamfumanisa enetyala yaza yamohlwaya ngokumthumela emkhosini. Kwangelo xesha, kwavavanywa elinye ityala e-Edinburgh, eSkotlani. Kwelo uJames Frederick Scott, uvulindlela owayeneminyaka engama-25, wafunyaniswa engenatyala. Urhulumente wabhena kodwa waphinda warhoxa kuba wayenomdla kwelinye ityala elaliseLondon. Kwelo ityala umzalwana ogama linguHerbert Kipps wafunyaniswa enetyala waza wathunyelwa emkhosini.
NgoSeptemba 1916, lafikelela kuma-264 inani labazalwana abacela ukukhululwa emkhosini. Kwelo nani ba-5 kuphela abakhululwayo, abali-154 banyanzelwa ukuba baye kwenza “imisebenzi eyayifunwa lilizwe” njengokwenza iindlela, abangama-23 benziswa imisebenzi engabandakanyi umlo emkhosini, abangama-82 bathunyelwa emkhosini, baza abanye bavalelwa entolongweni ngokwala ukuya emfazweni. Abantu abaninzi yabacaphukisa gqitha inkohlakalo abaphathwa ngayo aba bazalwana kwintolongo yomkhosi, ngoko ke urhulumente wabathumela ukuba baye kwenza imisebenzi yoluntu.
UEdgar Clay noPryce Hughes, owaba ngumveleli wesebe laseBritani kamva, baya kusebenza kwidama laseWales. Kwelinye icala, uHerbert Senior, omnye kubazalwana abasibhozo ababuyiswa eFransi, wathunyelwa kwiNtolongo yaseWakefield eYorkshire. Abanye bathothoza izigwebo zabo zomsebenzi onzima kwiimeko ezimaxongo kwiNtolongo yaseDartmoor, ekwathunyelwa kuyo abazalwana abaninzi yatsho yanenani elikhulu labantu abangavumiyo ukuya emfazweni ngenxa yesazela.
UFrank Platt, uMfundi weBhayibhile owavumayo ukwenza umsebenzi ongaz’ ukumbandakanya kwimfazwe emkhosini, waphathwa kakubi gqitha ngokwala kwakhe ukuya kulwa. UAtkinson Padgett, owafunda inyaniso kwixeshana nje elincinane ngaphambi kokuba abizelwe emkhosini, naye wangcungcuthekiswa gqitha ziziphathi-mandla zomkhosi ngenxa yokwala kwakhe.
Nakuba imbono yethu yokuba amaKristu angathathi cala kuloo mbambano isenokuba yayingaqondwa kakuhle ngabanye abazalwana ngelo xesha, babezimisele ukukholisa uYehova uThixo. Abo bakhankanywe ngamagama kweli nqaku bamisela umzekelo omhle wokungathathi cala “ngelixa lovavanyo” elinzima gqitha. (ISityhi. 3:10)—Liphuma koovimba bethu abaseBritani.